10 Matipi Ekuzorora Kwemhuri MuEurope | Save A Train
musha > Travel Europe > 10 Matipi Ekuzorora Kwemhuri MuEurope
Nguva yekuverenga: 6 maminitsi(Last Updated On: 24/10/2020)
Zororo remhuri muEurope rinogona kunakidzwa kwazvo kuvabereki nevana veese mazera kana uchironga zvakanaka. Europe ndiyo nyika yemizinda uye mabhiriji, mapaki akasvibira akasvibira uye matura uko vasikana vadiki nevakomana vanogona kunyepedzera kuve machinda uye machinda kwezuva rimwe. Pane nzira huru dzekukwira makomo uye yakawanda nzvimbo yemitambo mune yakakura kunze, asi kufamba nevana kunonetsa.
Kubva pakuronga kusvika kurongedza, isu takagadzira yekupedzisira gwara kune inorota rwendo rwemhuri. Ingo tevera yedu 10 matipi akanakisa emhuri yekuzorora kuEurope kuve nechokwadi chemberi rwendo rwemhuri.
Rail senga ndiyo zvakatipoteredza ushamwari nzira yokufamba. Nyaya iyi yakanyorwa kudzidzisa pamusoro Train Travel uye chakaitwa Save A Train, Iwo Akachipa Zvipfuura Zvitima MuNyika.
1. Matipi Ekuzorora Kwemhuri MuEurope: Tora Vana Vako Vabatanidzwe
Chakavanzika chemhuri huru yezororo ndipo apo mhuri yese painenge iri mubhodhi uye ichifara. Europe izere zvinoshamisa zvinoshamisa, zvinokwezva, mapaki evaraidzo, nenzvimbo zvekushanyira, uye kuita kuti vana vako vatore chikamu mukuronga rwendo rwako kuenda kuEurope kunozova zororo reroto. Ita tsvagiridzo yako pamberi, sarudza zvinokwezva zvaunoda kushanyira, uye mavara evana vako angade, uyezve ita kuti vana vatore 3-4 zvinokwezva pane izvo zvinyorwa. Nenzira iyi munhu wese anofara uye ane chimwe chinhu chekutarisira zuva rega rega.
Brussels kuenda kuAmsterdam Chitima
London kuAmsterdam Chitima Mitengo
Berlin kuAmsterdam Chitima Mitengo
Paris kuAmsterdam Chitima Mitengo
2. Gara Mune AirBnB
Airbnb yakachipa, zvimwe zvakavanzika, uye ane manzwiro epamba, izvo zvakakosha zvikuru kuvana kana uri kure nekumba. AirBnB ndiyo yakanaka pekugara sarudzo yemhuri yezororo muEurope nekuti mahotera muEurope anodhura zvakanyanya, kunyangwe nedhiri remangwanani. Kugara muAirbnb kunokupa iwe kicheni yekubika chikafu chako, masikati-kuenda-kuenda, uye nguva yekudya kwemangwanani paunogona kukurukura nezvezuva racho.
wo, kune yakawanda nzvimbo uye zvakavanzika zvevana nevabereki, kuzorora mushure mezuva refu rekutsvaga.
Florence kuenda kuRoma Chitima Mitengo
Naples kuenda kuRoma Chitima Mitengo
Florence kuenda kuPisa Chitima Mitengo
Roma kuenda kuVenice Chitima Mitengo
3. Matipi Ekuzorora Kwemhuri MuEurope: Buda kunze kweBusy City Center
Europe is full of scenic nature reserves uye National mumapaki, nemigwagwa mikuru yekukwira uye nzvimbo dzepikiniki. Hukuru hwepanyama muEurope hwakachinjika zvekuti kunyangwe iwe uri kufamba nevana vadiki, unogona kuongorora mapopoma uye maonero.
Mapaki mazhinji anowanikwa Via chitima kubva kumaguta makuru. Kana iwe ukaronga pamberi uye uuye wakagadzirira, hapana chikonzero nei usingafanire kunakidzwa nekunze kwekunze uye kunakirwa nemhepo nyowani, masango, nemapaki ane theme.
Milan kuRoma Chitima Mitengo
Pisa kuRoma Chitima Mitengo
4. Bhuka Chokufambisa Chako
Kuziva nzira yako yekutenderera kune imwe nzvimbo nzvimbo kwakakosha kana uchifamba nevana. Iwe haudi kurasikirwa uye kutenderera neguta netsoka kana kufamba kubva kunhandare, zvisinei nemamiriro ekunze. saka, kuronga uye kubhuka nzira yako yekufambisa muEurope ichavimbisa yakanaka mhuri zororo.
Kufambisa kweruzhinji kwakavimbika zvakanyanya uye yakagadzikana muEurope. Kune zvakawanda zvekufamba sarudzo mukati nekunze kweguta nzvimbo. Kutenderera nechitima netram kwakanaka nevana nekuti unogona kusvika kwese kwese, dzivisa traffic pane yako bhajeti yerwendo.
Mukuenzanisa ne kuroja mota uye kushandisa yakawanda nguva uchitsvaga kupaka kana kungo tarisa mumugwagwa, unogona kunakidzwa nekutasva uye zvekudya, apo a chitima kufamba nevana muEurope. Yakakura mukana wekufamba muEurope nevana nechitima ndechekuti vana vanofamba vakasununguka neEuro njanji kupfuura.
Amsterdam kuLondon Chitima Mitengo
Berlin kuLondon Chitima Mitengo
5. Matipi Ekuzorora Kwemhuri MuEurope: Pack Light
Kuenda mu Zviteshi zvezvitima zveEurope nematirara uye masutukesi makuru anogona kunetsa. Zvimwe zviteshi zvezvitima hazvizove nemalifti kana escalators, saka zvakanakisa kurongedza uye kufamba mwenje. Ive neshuwa yekurongedza folda inofamba uye anotakura-ons, nenzira iyi kana vana vakura zvakakwana, vanogona kutakura mukwende wavo.
kunze, kurongedza mwenje zvinoreva kurongedza zvese zvakakosha pakufamba kwemhuri. saka, kuchengeta vana vakabatikana pakukwira kwechitima nemidziyo yekupenda, audiobooks, kana katuni yekutarisa nguva pane iyo iPad, ichave rubatsiro rwakakura.
Munich kuSalzburg Chitima Mitengo
Munich kuPassau Chitima Mitengo
Nuremberg kuPassau Chitima Mitengo
Salzburg kuPassau Chitima Mitengo
6. Kudya Kunze Nevana MuEurope
Iwe unofanirwa kuziva kuti maresitorendi muEurope haape vana chikafu, saka vakuru vayo’ migove yemunhu wese. Izvi zvinonyanya kukosha kuti utarise semuenzaniso kana uri kuenda kuItari, haungawane pizza yehukuru hwevana kana zvikamu zvepasta, saka gadzirira.
asi, haufanire kudya kunze. Rimwe remazano edu akanakisa ekufamba nevana muEurope kuve mapikniki emhuri. Zvakawanda zvakataurwa nezve mapaki eEuropean nehunhu nekuti nyika dzakasvibirira dzakashongedzwa zvakagadzirirwa kuitisa pikiniki yemhuri yako. Bata zvikafu, muchero mutsva, nemiriwo pamusika weko uye wagadzirira pikiniki yemasikati. Mitengo pamisika yevarimi yakachipa zvakanyanya pane muzvitoro nezvitoro. Pamusoro pazvo zvese kumusoro, chimbofunga nezvemaonero auchanakidzwa nawo ega ega kuruma uye zvakakwana mahara.
Munich kuZurich Chitima Mitengo
Berlin kuenda kuZurich Chitima Mitengo
Basel kuZurich Chitima Mitengo
Vienna kuenda kuZurich Chitima Mitengo
7. Matipi Ekuzorora Kwemhuri MuEurope: Ngarava Uye Mahara Ekufamba Nzendo MuEurope
Iwe unogona kuzviita zvese iwe mepu uye mabhuku uye maapp, asi kujoina chikepe kana kufamba kwekufamba kwakanyanya. Mumaguta mazhinji eEurope kune akasununguka maguta ekufamba nzendo nemutungamiriri wepanzvimbo. Uyu mutungamiri anofara acharatidza uye ataure zvakavanzika zvakachengetedzwa zveguta, pasina iwe kurasika mumigwagwa 'maze. Iye mutungamiri anonongedzerawo maresitorendi emuno nemaseti emasikati uye nekupa rairo yakanakisa pane zvekuita muguta.
Europe izere migero uye nzizi, saka munhu rwendo rwechikepe kumwe kunakidzwa uye yakasarudzika nzira yekufamba uye kuongorora. Zvichava zvinonakidza vana nekuzorora iwe.
Interlaken kuZurich Chitima Mitengo
Lucerne kuenda kuZurich Chitima Mitengo
Bern kuZurich Chitima Mitengo
Geneva kuZurich Chitima Mitengo
8. Ita Nguva Yekutasva KweCarousel
Mazhinji maguta eEuropean anozove neakajeka uye inoyevedza carousel munzvimbo huru yeguta. Panzvimbo yekumhanyira kune inotevera saiti, mira, uye bvumira vana vadiki kuti vaende kunokwira kwakawanda sezvavanoda. Kunakidzwa nekukwira carousel kana iyo Eiffel Tower iri kumashure kwako, inguva isingakanganwike yevana vadiki uye vakuru.
Amsterdam kuParis Chitima Mitengo
London kuParis Chitima Mitengo
Rotterdam kuParis Chitima Mitengo
Brussels kuParis Chitima Mitengo
9. Matipi Ekuzorora Kwemhuri MuEurope: Ita Nguva Yekuti "Oops"
Kungoti uri muSwitzerland, hazvireve kuti zvese zvichafamba mushe parwendo rwemhuri yako. Paunenge uchifamba nevana, chero chinhu chinogona kuitika, kunyangwe muEurope, so be sure to leave time for oops on the trip. Make time for unplanned surprises, kunonoka, shanduko kuzvirongwa nekutenda kune grumpy kiddos, uye uvepo uye uve wakagadzirira kugadzirisa.
Salzburg kuenda kuVienna Chitima Mitengo
Munich kuVienna Chitima Mitengo
Graz kuenda kuVienna Chitima Mitengo
Prague kuenda kuVienna Chitima Mitengo
10. Ratidza Ivo Vana Europe Kubva Iyo Yakarohwa Nzira
Rimwe remazano edu epamusoro ekufamba nevana ari kuvaratidza maitiro famba uchibva munzira yakarohwa muEurope. Dzivisa vanhu vazhinji mumakwere makuru, mitsara yegelato, uye mifananidzo yemhuri, nekuenda navo kunzvimbo dzakavanzika, nzvimbo dzinoyevedza, uye hunoshamisa hunhu.
Vana vanoda ngano uye adventures, saka tora uende navo kunzvimbo idzo ngano dzakagadzirwa. Iyo inzira yakanaka yekushandisa yakanaka nguva pamwe chete, ita zvakanakisa zvemhuri zororo muEurope, uye uvadzidzise nezve yakapfuma tsika uye nhoroondo yeEurope.
Europe inzvimbo huru yezororo yemhuri chero nguva yegore. Kunyangwe iwe uri mhuri inotsvaga yekushanya kana unofarira kuona nzvimbo uye mamuseum, Europe yawana zvese. Pamusoro pe, Europe inoshamwaridzika mumhuri kana zvasvika pakutakura uye akakosha maguta anopfuura. Wedu 10 matipi akanakisa emhuri yekuzororo muEurope ichave irubatsiro rwakakura kana iwe uchironga yako inotevera kana kunyangwe yekutanga rwendo kuenda kunyika yenhare uye ngano.
Milan kuenda kuVenice Chitima Mitengo
Padua kuenda kuVenice Chitima Mitengo
Bologna kuenda kuVenice Chitima Mitengo
pano pa Save A Train, tichafara kukubatsira kuronga yakanakisisa mhuri zororo muEurope nechitima.
Iwe unoda here kupinza yedu blog positi "10 Akanakisa Matipi Ekuzorora Kwemhuri MuEurope" pane yako saiti? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://embed.ly/code?url =Https://www.saveatrain.com/blog/tips-family-vacation-europe/ ‎- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
Kana uchida kuva nomutsa vanoshandisa dzenyu, unogona kuvatungamirira zvakananga kunyika yedu mapeji kutsvaka. In batanidzo ichi, you will find our most popular train routes – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside uine Links edu Chirungu kumhara mapeji, asi isuwo tine https://www.saveatrain.com/ja_routes_sitemap.xml, uye iwe unogona kushandura iyo / ja ku / es kana / de uye mimwe mitauro.
Europewithkids familyholiday yemhuri Familytripeurope familyvacation traintravelwithkids
Business Travel nechitima, Chitima Kufamba, Rovedza Kufamba Austria, Rovedza Kufamba Britain, Rovedza Kufamba France, Rovedza Kufamba Germany, Rovedza Kufamba Italia, Chitima Kufamba UK, Travel Europe